3rd World March ကို World March ဟုကြေငြာခဲ့သည်
ဖိုရမ်နှင့် Conferences က
ပင်မစာမျက်နှာ » NOTICIAS » စာနယ်ဇင်းမှတ်စု » 3rd World March ကိုကြေငြာခဲ့သည်
3rd World March ကိုကြေငြာခဲ့သည်
18 / 10 / 2020 04 / 10 / 2020 အားဖြင့် အန်တိုနီယို Gancedo
၂၀၂၄ အတွက် 3rd World March ကိုအာဂျင်တီးနားနိုင်ငံ Mar del Plata ရှိအကြမ်းမဖက်ရေးဖိုရမ်တွင်ကြေငြာခဲ့သည်
၏အခမ်းအနားအတွက် ၁၀ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့ de la Mar del Plata ရှိအကြမ်းမဖက်ရေးအတွက်ရက်သတ္တပတ် မောင်းနှင် Osvaldo Bocero y Karina Freira ဘယ်မှာနိုင်ငံပေါင်း 20 ကျော်ကနေတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ အမေရိကတိုက်, ဥရောပ y အာဖရိကတိုက်.
အဲဒီမှာ ရာဖေးလ် de la ရူဗျောဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့ ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှကြေညာခဲ့သည် မက်ဒရစ် သော၌ 2024 အဆိုပါလုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်အကြမ်းမဖက်ဘို့3ªကမ္ဘာ့ဖလားမတ်လ.
El အကြမ်းမဖက်ရေးဖိုရမ် ၎င်းသည်ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်တောင်းဆိုမှုသုံးခုဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အခမ်းအနားဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။ español, ပေါ်တူဂီ y ဂွါရီနီ။ ဒါဟာမိနစ်အနည်းငယ်တရားထိုင်ခြင်းနှင့်သင်တန်းသားများအကြားဆက်သွယ်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။
Osvaldo သည်အောင်မြင်မှုနှင့်ကန ဦး တိုးတက်မှုကိုတင်ပြခဲ့သည် အကြမ်းမဖက်ဘို့အပတ် ၏မူဘောင်အတွင်း ကမ္ဘာ့ဖလားမတ်လ1ª ထဲမှာ 2009 နှင့်ဤ 10 နှစ်အတွင်းတိုးတက်ခဲ့သည်။ တိုတောင်းသောအကျဉ်းချုပ်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကြောင်းခရီး၏ပုံရိပ်တွေနဲ့ပြခဲ့သည်။
ကျနော်တို့အဆိုပြုချက်အချို့ကိုမျိုးပွား ရာဖေးလ် de la ရူဗျောဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့, အများအတွက်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ကမ္ဘာ့ဖလားချီတက်ပွဲသူ၏မိန့်ခွန်းတွင်ဖော်ပြထားသည်
"ဟုတ်တယ် အကြမ်းမဖက်ရက်သတ္တပတ် ၎င်းသည် ၁၀ နှစ်တာကာလကြာရှည်တည်မြဲခြင်း၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လုပ်ငန်းစဉ်၏စဉ်ဆက်မပြတ်လုပ်ဆောင်မှုဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အားလမ်းနှင့်တိုးတက်မှုကိုပြသသည်။
2016 ခုနှစ်တွင်ဖေဖော်ဝါရီလအစောပိုင်း၌တည်၏ Peña Blanca (ဟွန်ဒူးရပ်စ်) Forum, လူ့အသင်းအဖွဲ့ MSGySV အကြမ်းမျဉ်းအားအဘိဓာန်တွင်ထည့်သွင်းရန်ကင်ပိန်းကိုစတင်ခဲ့သည် စပိန်ဘာသာစကား၏ပညာရေး.
၎င်းသည်ဤလုပ်ဆောင်မှုကိုစကားလုံးမရှိသောအခြားဘာသာစကားများသို့တိုးချဲ့ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည်။ ရုရှား၌အကြမ်းမဖက်ဟုဆိုသည် ненасилие, ခကျြ၌ကဖြစ်ပါတယ် nenásilíဂျာမန် gewaltlosigkeit, အီတလီမှာ အကြမ်းမဖက် နှင့်အင်္ဂလိပ်လို အကြမ်းမဖက်, ဒါပေမယ့်စပိန်ဘာသာမတည်ရှိပါဘူး
ကျနော်တို့၏အားသာချက်ယူပါ အကြမ်းမဖက်နေ့ အတူတကွနှင့်တုံးတိုမပါသောတစ်ခုတည်းသောစကားလုံးအဖြစ်အသုံးပြုရန်ဖိတ်ကြားသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စပိန်ဘာသာစကားဖြင့်တရား ၀ င်သောစကားလုံးကိုရနိုင်သည်။ ယင်း၏အသုံးပြုမှုကိုလူသိများစေရန်နှင့်လူမှုရေးခေတ်သစ်တစ်ခုအတွက် entity တစ်ခုပေးရန် entity နှင့်ပူးပေါင်းရန်ပူးပေါင်းကြပါစို့။
အကြမ်းမဖက်ရုပ်ရှင်ပွဲတော် ဒီကနေ့ကမကထပြုတဲ့ဒီ ၃ ရက်ကြာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပွဲတော်ကိုစတင်ပါတယ် FICNOVA.
မြေထဲပင်လယ်ငြိမ်းချမ်းရေး: ကင်ပိန်းစတင်ခဲ့သည် ကမ္ဘာ့ဖလားမတ်လ2ª သောပြောင်းလဲပစ်ရန်ရည်ရွယ်ပါသည် ငြိမ်းချမ်းရေးပင်လယ်၌ယဉ်ကျေးမှုများနှင့်နျူကလီးယားလက်နက်များမရှိသောအစည်းအဝေးတစ်ခုတွင်ရှိသည်.
- ၏ပုံကြမ်း အယ်ဒီတာ့အာဘော် Saure။ စာမျက်နှာ ၁၀၀ ။ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာဖြစ်လိမ့်မည် စပိန်နှင့်ဘစ်စကီဘာသာစကားများ။ အခြားဘာသာစကားများဖြင့်ထုတ်ဝေရန်မျှော်လင့်ထားပါသည်။
- ၏စာအုပ် နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆု၏အတွင်းရေးမှူး - မေးခဲ့သည် MSGySV အကြမ်းမဖက်ခြင်းဆိုင်ရာအခန်းကိုရေးပါ။ ကျနော်တို့ဒီနှစ်ဒီဇင်ဘာလ၌ကယ်နှုတ်တော်မူရန်ရှိသည်။
-2nd MM ၏စာအုပ်။ ကျနော်တို့ contents တွေကိုနှင့်ပရိသတ်နှင့်အတူရှိကြ၏။ အချို့နေရာများတွင်သတင်းအချက်အလက်များပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့နည်းနည်းကြာကြာစောင့်ဆိုင်းခြင်းနှင့်သည့်အခါကထွက်ရတဲ့စဉ်းစားနေကြသည် TPAN။ ထိုကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုခေါင်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ သီးခြားအခန်းတစ်ခန်းကိုထည့်သွင်းလိမ့်မည်။
- ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံသားဆိုက်ဘာလှုပ်ရှားမှုပွဲတော်တစ်ခုကျင်းပခြင်းအတွက်ဤလုပ်ငန်းကိုလုပ်ဆောင်နေသည် TPAN ကြေငြာသောအခါအင်အားသုံးသို့၎င်း၏ဝင်ရောက်မှုဆင်နွှဲရန် ကုလသမဂ္ဂ။ ၂၀၂၁ အစအတွက်တွက်ချက်သည်။
- ကျနော်တို့ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ် ငြိမ်းချမ်းရေး Perugia - Assisi ဘို့မတ်လ လာမယ့်အောက်တိုဘာ 10
- အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာညီလာခံ ဂျီနီဗာ အောက်တိုဘာလကုန်မှာ နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆု၏အတွင်းရေးမှူး ဖိတ်ကြားခဲ့သည် MSGySV အခြားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း ၄ ခုနှင့်အတူတကွ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းဖြင့်ဤအဖွဲ့အစည်းများမှလူငယ်များသည်သူတို့၏အဆိုပြုချက်များ၊
- လက်တင်အမေရိကငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဒေသဆိုင်ရာဖိုရမ် ၏ချီတက်အတွက် 2021 ကမောင်းနှင်သည် နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆု ၏မြို့၏ထောက်ခံမှုနှင့်အတူ Merida- မက္ကစီကို နှင့်ဒေသတွင်းရှိ9တက္ကသိုလ် မာယာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းဖိတ်ကြားထားသည် MSGySV.
ငါတို့တရားဝင်ကြေငြာခဲ့သည် MM 3ª အောက်တိုဘာ 2, 2024 ရက်တွင်စတင်ပါလိမ့်မည်
- လိုပဲ MM 2ª ၎င်းသည်ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကိုလှည့်ပတ်ပြီးနောက်တူညီသောမြို့တစ်မြို့တွင်စတင်ပြီးအဆုံးသတ်လိမ့်မည်။
- ဒေသတွင်းခရီးစဉ်များ - တောင်အမေရိကမတ်လ, ဗဟိုအမေရိကန်မတ်လ, မြေထဲပင်လယ်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်မတ်လ y လက်တင်အမေရိကမတ်လ။ အခြားသူများရှိလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ တိုက်ကြီးများတစ်လျှောက်တွင်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းခွဲခြားသည့်ချီတက်ပွဲများရှိသည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
- စိတ် ၀ င်စားသူများကိုအများဆုံးပါ ၀ င်မှုဖြစ်စေရန် virtual tour ပုံစံကိုလည်းထည့်သွင်းမည်ဖြစ်သည်။
3rd World မတ်လပြက္ခဒိန်
- ၆/၂၁/၂၀၁၁ တွင်၊ ၂၀၂၄ ခုနှစ်တွင်တတိယမြောက် MM အတွက်လျှောက်ထားရန်မြို့များကိုအခြေစိုက်ထားသည်။
- လျှောက်ထားသောမြို့ကြီးများသည်လျှောက်လွှာကို ၂၀၁၂/၂၀၁၂ နေ့တွင်ပေးပို့ပါမည်။
-2/10/2022 ကို MM MM စတင်မည့်အချိန်၊ အဆုံးတွင်ကြေငြာမည်။
-2/10/2024 3rd World March စတင်ခြင်း။
မှ MSGySV Global Coordination Team ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်အောက်တိုဘာလတွင်အသင်း ၀ င်သန်းခေါင်စာရင်းအသစ်ကိုပြုလုပ်ပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့အသစ်အတွက်ရွေးကောက်ပွဲများကျင်းပလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်သိရပါသည်။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်ပါ ၀ င်ရန်နှင့်ဖိတ်ရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ်ပါသည် စစ်ပွဲများနှင့်အကြမ်းဖက်မှုမရှိရင်ကမ္ဘာ့ဖလား.
နောက်ထပ်ဘာမျှမ, အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ...
ဤဆောင်းပါး၏အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ခြင်းအတွက် Liz Vasquez အားကျွန်ုပ်တို့ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
categories စာနယ်ဇင်းမှတ်စု လက်မှတ်အညွှန်း
CINEMABEIRO ကို A Coruñaတွင်တရားဝင်တင်ဆက်သည်
Gastón Cornejo Bascopéကိုဂုဏ်ပြုပါ
မှတ်ချက် Leave ပြန်ကြားချက်ကိုပယ်ဖျက်
နာမတျောကို အီလက်ထရောနစ်စာပို့ web ကို
ဇန်နဝါရီလ 2021 (2)
2020 အောက်တိုဘာလ (3)
စက်တင်ဘာလ 2020 (3)
ဧပြီလ 2020 (1)
မတ်လ 2020 (14)
ဖေဖော်ဝါရီလ 2020 (39)
ဇန်နဝါရီလ 2020 (26)
ဒီဇင်ဘာလ 2019 (46)
နိုဝင်ဘာလ 2019 (55)
2019 အောက်တိုဘာလ (59)
စက်တင်ဘာလ 2019 (35)
သြဂုတ်လ 2019 (13)
ဇွန်လ 2019 (4)
ဧပြီလ 2019 (2)
နိုဝင်ဘာလ 2018 (3)
စက်တင်ဘာလ 2010 (1)
TPAN ၏အင်အားထဲသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းအကြောင်း
© 2021 ကတီထွင် 4P စျေးကွက်